December | 2016 | Indrenionline.com
Monthly Archives: १६ पुष २०७३, शनिबार २०:३१
तीन दल मिल्नुको विकल्प छैन: नेम्वाङ
इलाम, १६ पुस । पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयनका लागि मुख्य तीन दल मिल्नुको कुनै विकल्प नरहेको बताए । शनिबार इलामको महमाई गाविसको गाउँ परिषदको उद्घाटन गर्दै नेता नेम्वाङले संविधान जारी गर्दा जसरी तीन दल मिलेर हस्ताक्षर गरेका थिए त्यसरी नै अहिले मिल्नुको विकल्प नभएको बताए। ‘काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जसरी संविधान जारी गर्दा एक थिए, त्यसरीनै अहिले पनि ...
देश मुठभेडतर्फ जाने संकेत: थापा
धनगढी, १६ पुस । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । विधेयकलाई तत्काल थाती राखेर सहमतिका लागि सरकारले अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । संविधान संशोधनका लागि दलहरुबीच भइरहेका पछिल्ला वार्ताले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि देश मुठभेडतर्फ जाने सम्भावना देखिएकोे उनको भनाइ थियो ।
खुसी साट्दै एउटै पति पाएकोमा जुम्ल्याहा महिला
तस्वीरमा देखिएका यी महिला पश्चिमी अस्टेलियाको पर्थमा बस्छन् । उनीहरु एकै पुरुषलाई विहे गर्न पाएकोमा खुसी साटिरहेका छन्। हो, हामीले देखेसुनेका छौं, जो कोही महिला पनि सौता हुन मन गर्दैनन्। तर, यी यस्ता नमूना जुम्ल्याहा महिला हुन्, जो विगत पाँच वर्षदेखि एउटै पुरुषलाई पार्टनर बनाएर खुसी साटिरहेका छन् । त्यो पनि लुकीचोरी होइन। एउटै बेडमा। । उमेरले ३१ वर्ष लागेका ...
नायिका रेखा थापाले तताइन कोठरी महोत्सव
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, १६ पुस । दाङको डुरुवा गाविस वडा नं. ४ कोठरीमा सञ्चालन भइरहेको माघी विशेष संस्कृतिक महोत्सवमा आजको माहोल नायिका रेखा थापाले तताइन । महोत्सवको अन्तिम दोस्रो दिन शनिवार नायिका थापाले दर्शकहरुलाई आफ्ना प्रस्तुतीबाट भरपुर मनोरञ्न दिइन । महोत्सवमा आज हजारौंको सहभागिता थियो । फिलिमि पर्दामा देखिने नायिका रेखा थापालाई प्रत्यक्ष देखिपछि दर्शकहरु रमाएका थिए । “स्वस्थ गाँउ ...
शिक्षण अस्पतालको क्यास काउन्टबाट दिउँसै एक लाख गायब
काठमाण्डौ, १६ पुस । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा विकृति नभएको होइन । समय समयमा विवाद पनि चुलिने गरेका छन् । विकृति र विसंगतिको अन्त्यको माग गर्दै धेरै पटक डा. गोविन्द केसी अनसन समेत वसे । हुँदा हुँदा अब शिक्षण अस्पतालको क्यास काउन्टरबाट दिउँसै रकम हराउन थालेका छन् । गएको शुक्रवार काउन्टरबाट ९५ हजार रुपैयाँ हराएको छ । दिउँसो १ बजे कर्मचारीहरु ...
पोखरा– उर्जामन्त्री एवं माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आफूले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत गरेको जनमुखी कामको पार्टीले स्वामित्व लिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । माओवादी केन्द्र कास्कीले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोडसेडिङमुक्त नेपाल बनाएर कमाएको जनमतको स्वामित्व पार्टी पंक्तिले नसकेको बताए । “लोडसेडिङमुक्त नेपाल बनाएपछि बिजुलीको मुखै नदेखेका दुरदराजका जनता समेत खुशी भएका छन तर जनार्दनले ‘क्रेडिट’ पाउँछ भन्ने ...
तुलसीपुर नगर जेसीजको अध्यक्षमा पौडेल
तुलसीपुर,१६ पुस । तुलसीपुर नगर जेसीजको वर्ष २०१७ को अध्यक्षमा बिमल पौडेल चयन भएका छन् । आज भएको पद हस्तान्तरण कार्यक्रम मार्फत पौडेल एक वर्षका लागि अध्यक्ष भएका हुन् । २०१३ मा तुलसीपुर नगर जेसीजको सदस्य लिएका पौडेल उपाध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष र कानुनी सल्लाहकार हुँदै वर्ष २०१७ को अध्यक्ष भएका हुन् । त्यस्तै कार्यकारी उपाध्यक्षमा दामोदर न्यौपाने र डम्वर डाँगी, ...
ओलीलाई देउवाले भने- ‘कि गाँजा खाएर सहिछाप गरे भन्नुहोस् होइन भने स्वीकारर्नुहोस्’
बागलुङ, १६ पुस । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव पहिलेनै समझदारी गरिसकेको बताए । आमसभामा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओलीतर्फ संकेत गर्दै सभापति देउवाले भने, ‘कि गाँजा, रक्सी खाएर सहिछाप गरेको हुँ भन्नुपर्‍यो, होइन भने कि गल्ती गरेँ भन्नुपर्‍यो, आफैले सहमति गरेको प्रस्ताव मान्नुपर्‍यो ।’ प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको प्रति आक्रोश व्यीत्र ...
बर्दियामा ७५ वर्षिय जेष्ठ नागरिक सहित २ जनाको मृत्यु
कुसुम बिक बर्दिया,१६ पौष । बर्दियामा भएका अलग अलग दुर्घटनामा परी ७५ वर्षिय जेष्ठ नागरिक सहित २ जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य २ जना गम्भिर घाइते भएका छन । बर्दियाको पुर्वि क्षेत्र वाके सग सीमा जोडिएको सोरहवा गाविसको वार्ड न ३ खैरेनि स्थित भित्रि सडक खण्डमा बढैयाताल बाट खैरेनि वजार तर्फ जादै गरेको भे ६ प ६५७८ नम्वरको मोटरसाइकिल अनियन्त्रित ...
बर्दिया १६ पुस । बर्दियामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । बर्दियाको सोरहवा गाविस वडा ३ खैरेनी स्थित भित्री सडक खण्डमा बडैयाताल बाट खैरेनि बजार तर्फ आउदै गरेको भे ६ प ५७८ नम्बर को मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भइ दुर्घटना भएको हो । सो दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक सोही ठाउका बर्ष २० का बि.क,पछाडि बसेका सोरहवा ३ खैरेनीका बर्ष ...